Ungayifumana njani imvume yokusebenza eUzbekistan? - ALinks
Ungayifumana njani imvume yokusebenza eUzbekistan?
January 10, 2022 UAntika Kumari Uzbhekistan, ivisa
Ngaba ujonge iindlela ezintsha zokwandisa ishishini lakho? Iinkampani zijonge ngakumbi ukukhula kwemisebenzi yazo kumazwe aphesheya kwezi ntsuku. Ngelixa i-Uzbekistan isenokungabi lilizwe lokuqala ukuphuma engqondweni xa ucinga ngokudityaniswa kwehlabathi, ilizwe lenze inkqubela phambili ebonakalayo kutshintsho kuqoqosho olusekwe kwimarike kumashumi eminyaka akutshanje.
Kukho iindidi ngeendidi zokundwendwela okufumanekayo eUzbekistan.
Abemi bamanye amazwe banokufaka isicelo sevisa ezininzi e-Uzbekistan. Iindidi zeVisa ziyatshintsha eUzbekistan, njengoko zisenza kwamanye amazwe amaninzi, kuxhomekeke kwisizathu sokuhamba. Ezi zilandelayo zezona visa zixhaphakileyo:
I-1-visa zabafundi kunye nabaqeqeshwa
Ii-visa ze-D-1 zezabantu abasebenzela ukumelwa ngoonozakuzaku ngokusisigxina.
Ii-visa zinikwa abantu bamanye amazwe abasebenza e-Uzbekistan.
Kubameli bamashishini, ii-visa ze-B-2 ziyafumaneka.
Ukusebenza e-Uzbekistan, abasebenzi bamanye amazwe baya kufuna i-visa E yohlobo.
Zithini iimfuno zokufumana iVisa yomsebenzi eUzbekistan?
Abafakizicelo kufuneka banikezele ngala maxwebhu alandelayo ukuze bafumane i-visa yokusebenza e-Uzbekistan:
Ipasipoti esebenzayo ubuncinci iinyanga ezintathu
Ikopi yephepha lolwazi lokundwendwela
Iifoto zokundwendwela ezinemibala emibini
ifom yesicelo se-visa ezaliswe ngokufanelekileyo
Isivumelwano sengqesho nenkampani esekwe eUzbekistan
Iileta zengcebiso ezivela kubaqeshi bangaphambili, kunye nobungqina bembali yomsebenzi womenzi-sicelo
Isatifikethi sikagqirha esichaza ukuba imeko yomenzi-sicelo ye-HIV kugqitywe ukuba ayinayo.
Ikopi esayiniweyo yengqeshiso, umzekelo, bubungqina bokufakwa e-Uzbekistan.
Umqeshi kufuneka afumane iphepha-mvume lokuShishina ngaphambi kokuba umntu welinye ilizwe enze isicelo semvume yokusebenza e-Uzbekistan. Le layisenisi ihlala ithatha iinyanga ezintandathu ukuya kwezilishumi elinambini kwaye ivumela inkampani ukuba iqeshe inani elithile labemi bamanye amazwe.
Ishishini kufuneka libonise nokuba kutheni ukukhuphela umsebenzi kumsebenzi welinye ilizwe kubalulekile. Ukwenza njalo, kuya kufuneka benze ukukhangela kwimakethi yezabasebenzi ukujonga ukuba ngaba ukhona umntu ofuna umsebenzi e-Uzbekistan ofumanekayo ukuze azalise isithuba. Umqeshwa onokubakho angaqala inkqubo yokufaka isicelo se-visa nje ukuba umqeshi amisele iimfuno zomsebenzi welinye ilizwe.
Abemi bamanye amazwe baneentsuku ezingama-30 zokuya e-Uzbekistan emva kokufumana i-visa yokusebenza. I-visa yokusebenza ilungile kuphela kumnyango omnye. Abemi bamanye amazwe kufuneka babhalise idilesi yabo kwisikhululo samapolisa sendawo emva kokufika e-Uzbekistan. Abasebenzi bamanye amazwe bangaqala ukusebenza e-Uzbekistan emva kokubhalisa iidilesi zabo kunye nokufumana imvume yokusebenza.
Ndingasifaka njani isicelo sokundwendwela kwi-Uzbekistan online?
Abahambi kufuneka bangenise iskena esidijithali sepasipoti yabo kunye nefoto yakutshanje yesitayile sepasipoti ukuze benze isicelo se-eVisa eUzbekistan kwi-Intanethi. Ipaspoti kufuneka ibe yeyangoku kwaye ikhutshwe lilizwe elifanelekileyo. Ukongeza, abafaki-zicelo kufuneka bangenise idilesi ye-imeyile kunye nendlela yokuhlawula imali ye-visa. Ukufaka isicelo kutyelelo lwe-Intanethi- https://www.onlinevisa.com/uzbekistan-visa/
ndwendwela le ndawo ukuze ufake isicelo kwaye wazi ngakumbi- https://visa.mfa.uz/
IiVisa zomsebenzi eUzbekistan
I-visa yase-Egypt yabemi base-US
I-visa yaseTurkey yabemi baseTaiwan
Ukuhambela eTurkey usuka eSingapore